Xisbiga C/raxmaan C/Shakuur oo walaac ka muujiyay Arrimaha doorashooyinka - Awdinle Online
Xisbiga C/raxmaan C/Shakuur oo walaac ka muujiyay Arrimaha doorashooyinka
Xisbiga Wadajir ee uu hoggaamiyo Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame ayaa walaac waxaa ay ka muujiyeen dib u dhaca ku yimid Jadwalka doorashooyinka Soomaaliya, iyaga oo sidoo kale soo dhaweeyay qoraalkii kasoo baxay Guddoomiyaha Aqalka Sare.
Qoraal kasoo baxay Xisbiga Wadajir syaa waxaa lagu sheegay in ay sigaar ah isha ugu hayeen heshiiskii Madaxda Dowladda & Dowlad Goboleedyada ee doorashooyinka Soomaaliya,isla markaana San wax tallaabo ah loo qaadin Arrimaha doorashoouinka kana walaacsan yihiin.
“Xisbiga Wadajir wuxuu walaac ka muujinayaa dib u dhaca jadwalka doorashada. Wuxuu ayidaa mowqifka Guddoomiyaha Aqalka Sare ee ku aadan xulista xubnaha labada aqal ee Somaliland ka soo jeeda”.
Sidoo kale Xisbiga Wadajir ayaa waxaa ay sheegeen inay si cad uga soo horjeeda in Dowladda Soomaaliya isku koobto Magacaabida Guddiga Maamulaya Xildhibaannada labada Aqal ee kasoo jeeda Gobolada Waqooyi, isla markaana saamileyda Siyaasadeed ee kasoo jeeda Soomaaliland loo Madax banaaneeyo inay iyaga soo xushaan Guddiga doorashooyinka.
Previous articleCiidamo ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed oo toogasho lagu dilay
Next articleDil ka dhacay Magaalada laas-Caanood & faah faahin laga helayo